China Car Car wokucoca Compound simahla iisampulu-XYS-CY0816 abavelisi kunye nabathengisi | Xieyanshi
Ukugcinwa kwePad kunye nezixhobo
Uthuli lweSelfowuni esomileyo esomileyo
Umbhobho othambileyo weSand Block
I-Coaxial Dust Umqokeleli weSoft Hose yeSander
Ingxowa yokuqokelela uthuli
Ukuqokelelwa kwePeyinti yokuQokelelwa
Ukunyamekelwa kweemoto ukuCoca indawo yeesampulu zasimahla-XYS-CY0816
Le mveliso yiarhente yepeyinti enobuchule esetyenziswa kumatshini wokucoca ngesantya esijikelezayo se-1400-2000 rpm. Inokususa ngokufanelekileyo amanqaku esanti e-P1200 kunye ne-sandpaper entle. Ukuba usebenzisa i-XYS CY-0818 iarhente yonyango yesipili, umphumo ungcono!
I-XYS-CY-0816 IsiXhobo esiPhakathi sokuHlikihla
1.Shukumisa ingxokolo phambi kokuba uyisebenzise!
2. Beka isixa esifanelekileyo seCY-0816 kuloo ndawo iza kupolishwa. Yandisa i-wax ngokulinganayo ngevili loboya (ivili lesiponji).
3, qala umatshini wokucoca ngevili emhlophe erhabaxa (ivili lesiponji) ukugcina isantya esifanayo, kwaye ngokuthe ngcembe kuvavanyo loxinzelelo, xa i-wax eshinyeneyo yomile ngokuthe ngcembe, ukunciphisa uxinzelelo oluqhubekayo lokucoca, de kube umbala wepeyinti ukhanye!
4, emva kokuba unyango lugqityiwe, sebenzisa ilaphu ukosula intsalela yokupeyinta ipeyinti!
5. Emva kokugqiba ipolishi, yenza isipili wokucoca kumphezulu wepeyinti nge-XYS CY-0188 isipili searhente!
1. Sebenzisa le mveliso phantsi kokukhanya ngokuthe ngqo okanye ipeyinti eshushu!
2. Le mveliso yiarhente yokucoca, nceda ulumkise ngokobume bomphezulu wepeyinti kunye nenkqubo ekhuthazwayo yeXYS!
3, Le mveliso ifuna ukuhlala kude nobushushu kunye nomlilo ovulekileyo!
4, xa ingasetyenziswa, nceda uvale ngokuqinileyo, ungatyi!
5, igcinwe kubushushu begumbi, akukho mkhenkce!
6. Lulumkele unxibelelwano lwabantwana!
Ngawaphi amanyathelo wokucoca ialuminium?
Iimpawu zeTripoli ezinje nge-T-88 Tripoli yethu kufuneka zisetyenziselwe ukusika kunye nokubetha, ngenjongo yokususa ukukrala okubonakalayo kunye neziphene ngexesha lokubuyiselwa kwesinyithi kwialuminium. Linyathelo lokuqala lokucoca ialuminiyam kwaye lidityaniswe namavili e-orenji yomoya obalekayo. Ayisetyenziswanga kwipolishi engenasici.
I-R-16 yethu eluhlaza irouge ihlala isetyenziswa njengenyathelo lesibini lokucoca ialuminium. Idityaniswe nevili lethu lokuhambisa umoya elityheli. Oku kufuneka kuvelise ukukhanya okumnandi okucocekileyo.
Sinikezela ngeekhompawundi ezimbini zokugqibela-i-rouge eluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-polishing purple compound. Zombini zimele ukugqitywa komboniso kwaye sicebisa ukuba udibanise enye yezi zinto zokugqibela zigqibezela iikhompawundi ezinamavili amhlophe e-flannel. Gcina ukhumbula ukuba uninzi lwabapolishi bethu bonwabile ngenkqubo yamanyathelo amabini echazwe apha ngasentla kwaye ushiye ukubonisa iipolishi kuphela kwiziqwenga zabo abazithandayo.
Egqithileyo ICANDELO LOKUQHUBA KAKHULU LOKUQHAWULA IPOLISI-XYS-CY0815
Okulandelayo: Metal wokucoca Compound for Buffing Wheels-XYS-CY0817
Best Car Ukuthengisa Wax ngokukhawuleza Car Polishi ...
XYS Professional arhente wokucoca mechanical-CY0818
Metal wokucoca Compound for Buffing Wheels-XYS ...
ICANDELO ELISEBENZA NGOKUTSHINTSHA KWEENKCUKACHA NGOKUSETYENZISWA KWEMOTO NGOKUGQIBELA ...
Ifowuni: + 86-21-57671870
Hayi 298, Maosheng Road, Dongjing Town, District Songjiang, Shanghai, China.